Muuqaal - BBC Somali
Muuqaal Wararka ugu waaweyn
Muuqaal DAAWO: Cunidda hilibka ceyriinka ah oo looga digay shacabka Itoobiya
Dhaqaatiirta Itoobiya waxay ka digayaan cunidda hilib aan la karin taas oo caadi ka ah qeybo ka mid ah dalkaasi.
24 Febraayo 2017
DAAWO: Cunidda hilibka ceyriinka ah oo looga digay shacabka Itoobiya
Muuqaal DAAWO: Saameynta abaarta ay ku yeelatay Soomaalida Itoobiya
Daawo warbixin ku saabsan abaaraha ka jiro deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Farhan Jimale ayaa soo jeedinaya. asxaabtaada la wadaag:
DAAWO: Saameynta abaarta ay ku yeelatay Soomaalida Itoobiya
Muuqaal DAAWO: Tuullo ku taalla Taliyaaniga oo maalin kasta dhulka dillaaco
Musiibo ayaa ka taagan deegaan ku yaalla dalka taliyaaniga oo lagu magacaabo Ponazano. Maalin kastaa hal mitir ayaa dilaacaysa, waxaana halkaasi laga raray dad badan.
DAAWO: Tuullo ku taalla Taliyaaniga oo maalin kasta dhulka dillaaco
Muuqaal Garoonka Mosul oo daacish laga qabsaday
Garoonka Mosul oo daacish laga qabsaday ka dib dagaal culus
Garoonka Mosul oo daacish laga qabsaday
Muuqaal Sida loo "sumeeyay" Kim Jong-nam
Sida loo "sumeeyay" Kim Jong-nam xilli uu ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee Kuala Lumpur, Malaysia.
Sida loo "sumeeyay" Kim Jong-nam
Muuqaal Dagaalka Mosul oo maalintii labaad galay
Dagaalka Mosul oo maalintii labaad galay ayadoo ciidamada ay kusii dhowaanayaan dhanka Galbeed oo daacish ay ku xoog badan tahay
Dagaalka Mosul oo maalintii labaad galay
Muuqaal Diyaarado ayaa duqeynaya fariisimaha Daacish ee Mosul
Diyaarado ayaa duqeynaya fariisimaha Daacish ee Mosul si looga saaro kooxda, dhufeysayada ay sameysteen
Diyaarado ayaa duqeynaya fariisimaha Daacish ee Mosul
Muuqaal Meelaha qaar waxaa laga soo sheegayaa in dad ay gaajo u dhinteen
Meelaha qaar waxaa laga soo sheegayaa in dad ay gaajo u dhinteen ka dib markii abaarta ay si xun u saameysay
Meelaha qaar waxaa laga soo sheegayaa in dad ay gaajo u dhinteen
Muuqaal Hay'adaha qaar ayaa billaabay inay gargaar gaarsiiyaan meelaha qaar
Hay'adaha qaar ayaa billaabay inay gargaar gaarsiiyaan meelaha qaar oo ay ku nool yihiin dadka soo barakacay ee xoolaha ay ka dhammaadeen
Hay'adaha qaar ayaa billaabay inay gargaar gaarsiiyaan meelaha qaar
Muuqaal UNICEF ayaa sheegtay un 944 kun oo caruur ay nafaqo la'aaan ku dhicikarto
UNICEF ayaa sheegtay un 944 kun oo caruur ay nafaqo la'aaan ku dhicikarto, illaa dhammaadka sanadkan, haddaanan loo gurman
UNICEF ayaa sheegtay un 944 kun oo caruur ay nafaqo la'aaan ku dhicikarto
Muuqaal Abaarta hadda jirto oo laga baqayo inay xaalad xun isu badasho
Somaaliya waxa haatan laga soo sheegayaa xaalad abaar oo ba’an oo saameysay dad iyo duunyaba.
Abaarta hadda jirto oo laga baqayo inay xaalad xun isu badasho
Muuqaal Madaxweyne Farmaajo oo billadaha madaxtooyada yaalla la tusay
Madaxtooyada billadaha yaalla ayaa la tusiyay madaxweyne Maxamed cabdullahi farmaajo.
Muuqaal Madaxweyne Farmaajo oo u guuray madaxtooyada
Madaxweyne Maxamed Cabdullahi farmaaajo ayaa maanta u wareegay madaxtooyada
Madaxweyne Farmaajo oo u guuray madaxtooyada
Muuqaal DAAWO: Hooyo ka hadlaysa saameynta ay abaarta ku yeelatay
"Wixii ay haysteen ee xoolo ahaa way dhaafeen, dan baa halkan isugu keentay", ayey tiri mid ka mid ah dadka barakacayaasha ee xerada Uusgure ee Puntland.
Muuqaal Daawo: Saamynta ay abaaraha ku yeesheen xoolo dhaqatada
Dadka xoolo dhaqatada ah ayaa abaarta ku waayay dhammaan xoolihii ay haysteen. Qaar ka mid ahna waxay ku barakeceen magaalooyiinka.
Daawo: Saamynta ay abaaraha ku yeesheen xoolo dhaqatada
Muuqaal DAAWO: Muslimiinta Jakarta oo loogu baaqay inay qof Muslim ah doortaan
Kumannaan qof oo reer Indonesia ah ayaa isugu tagay magaalada Jakarta, ayagoo Muslimiinta ku baraarujinaya in musharax Muslim dhab ah ay u doortaan Maayarka magaalada.
DAAWO: Muslimiinta Jakarta oo loogu baaqay inay qof Muslim ah doortaan
Muuqaal Daawo: Dibedbaxyo lagu taageerayo Farmaajo
Magaalada Muqdisho waxaa wali ka socda dabaaldegyo iyo isu soo baxyo ay samaynayaan dadweynaha iyo ciidanka dowladda.
Daawo: Dibedbaxyo lagu taageerayo Farmaajo
Muuqaal DAAWO: Guusha Farmaajo oo si weyn loo soo dhoweeyay
Meelaha sida weyn looga dabaaldegay waxaa ka mid ah xaafadda Islii ee Nairobi, halkaas oo ay isugu soo bexeen kumannaan qof.
DAAWO: Guusha Farmaajo oo si weyn loo soo dhoweeyay
Muuqaal Daawo: Qabanqabada Doorashada madaxtinnimada Soomaaliya
Walaaca ugu weyn ee hareeyay doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu sheegay inuu yahay musuqmaasuq. Wax is daba marin xoog leh ayaa la sheegayaa in ay ka dhacaday doorashadii baarlamaanka, halkaasoo xildhibaannada qaarkood la sheegayo inay codadka iibsadeen.
Daawo: Qabanqabada Doorashada madaxtinnimada Soomaaliya
Muuqaal Ahmiyad intee la eg ayay leedahay soohdinta badda ee ay isku hayaan Soomaaliya iyo Kenya?
Halkan ka daawo muuqaal gaaban oo ku saabsan ahmiyadda badda ay isku hayaan Soomaaliya iyo Kenya
Ahmiyad intee la eg ayay leedahay soohdinta badda ee ay isku hayaan Soomaaliya iyo Kenya?
Maxaa horyaallo ra'iisul wasaaraha la magacaabay?
Cilmi baadhis: Khudrada oo la cunaa cimrigay dheeraysaa!